Nidaam - Kooxda hagaajinta nidaamka
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Hawlaha Guud - Nidaam
Kooxda hagaajinta nidaamka waxaa abuuray Sharci dejinta gudaha HB 1677 si "loo aqoonsado, loo hirgaliyo, loona soo gudbiyo warbixin ku saabsan hagaajinta" nidaamka kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka. Nidaamka loo yaqaan 'Sync' wuxuu helaa kaabayaal qiimo ku leh meeraha, dadka, iyo muhiimadda dhaqaale. Nasiib darrose, maalgelinta kaabayaasha aasaasiga ah ee biyaha, bulaacadaha, iyo gaadiidka qaabab kala duwan ayaan la jaanqaadi karin baahida bulshada. Guddiga Howlaha Guud oo ay weheliyaan waaxaha Ganacsiga, Ecology iyo Caafimaadka, Guddiga Horumarinta Gaadiidka, iyo Waaxda Gaadiidka ee Gobolka Washington ayaa isku dubbaridaya dadaalkooda si loo abuuro qaab wax ku ool ah oo loogu talagalay maalgelinta kaabayaasha, iyo in la taageero bulshooyinka ku nool dhaxalka yutiilitida dhamaadka nolosha waxtarka leh.
Casharka Shaqada Ku Xiga:
Khamiis, Maarso 4, 2021
Sync ayaa sii wadaya sanadkii saddexaad ee hagaajinta nidaamka kaabayaasha. Ahmiyadeena 2020 waa la heli karaa halkan. Shirka Sync ee soo socda waa Khamiista, Maarso 4 markay tahay 9:30 subaxnimo ilaa 11:30 subaxnimo. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka soo qayb gasho oo aad u kuurgasho, fadlan la xiriir Buck Lucas, Maamulaha Mashruuca Sync, at buck.lucas@commerce.wa.gov.
Nidaaminta Warbixinnada Sharci-dejinta
Warbixinta Hordhaca 2020
2019 Warbixin Buuxda
Soo Koobida Fulinta ee 2019
2018 Warbixin Buuxda
Soo Koobida Fulinta ee 2018
Dukumentiyada isku xir
Hagaha Hordhaca ah ee Qiimeynta Qorsheynta
Webinar Qorshaynta Qiimaha (Fiidiyow)
Bogga Maareynta Hantida
Maareynta Hantida Webinar (Fiidiyow)
Bandhigga Mashruuca Deegaanka ee Lincoln County
Nidaamka Goboleynta RCAC
Webinar goboleed (Fiidiyow)
Maxay yihiin baahiyaha farsamo ee bulshadaada?
Marabtaa inaad kaqaybqaadato?
Haddii aad jeceshahay in lagu ogeysiiyo kulamada soo socda iyo waxqabadyada, waxaad ku biiri kartaa liiska qaybintayada adigoo foomka ka buuxinaya dhanka midig. Haddii aad jeclaan lahayd inaad kaqeybqaadato nashaadaadka mustaqbalka, ama haddii aad hayso talo soo jeedin aad jeclaan lahayd inaad bixiso, fadlan la xiriir Buck Lucas, Lead Staff, at (360) 725-3180, or Buck.Lucas@commerce.wa.gov.
Ku soo biir Liiska Emailka Isku-dhafan